Shiinaha oo loo yaqaan 'CPAP batari smart' ah oo leh awood soosaar awoodeed oo lagu dhisi karo Battery Lithium Battery 7.2V 13.6Ah warshad iyo saarayaasha | Polymer
Batariga smart ee CPAP oo leh soosaar koronto oo leh batari Lithium Batari ah 7.2V 13.6Ah
Waxaan bixinaa batteriga caqliga badan ee 'CPAP' oo leh awood muuqaal koronto oo dib loo soo celin karo Battery Lithium Battery 7.2V 13.6Ah. Xirmooyinka batteriga waxaa loo adeegsan karaa CPAP, qalabka dabeysha, mashiinka neefsashada ， batteriga bedelka ama codsiyada kale ee ku habboon. Isgaarsiinta I2C, baytarigu wuxuu leeyahay awood bandhig.Made oo ah Samsung 18650 unugyada batteriga ah ee nolosha wareega dheer.Battery wuxuu ansixin karaa ROHS, UL, CE, CB, UN38.3, MSDS, IEC62133, shahaadada KC oo ah baahida macaamiisha. PLM waa soo saare xirfad leh batariga lithium ee dib loo soo celin karo oo leh khibrado sanado badan ah. Waan ka aqbalnaa amarka OEM / ODM dhamaan dalalkoo dhan.Ugu horayn macaamiisheena Yurub, Aasiya, Kuuriya, America, Japan, Canada iwm. Fadlan dareensan inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto markii aad batteriga u baahan tahay.
Moodeliga: PLM-NH2057QE34 Xidhmada Baatariga
Awoodda Magaceed: 7.2v
Awoodda Caadiga ah: 13.6ah
Dhererka: 23 * 78 * 151mm
Kiiska batteriga: XAALADAHA PASTICIC
Hordhaca alaabada ee PLM-NH2057QE34
Batariga caqliga leh ee leh muuqaalka korontada wuxuu ku dhisaa Lithium Battery dib u soo celin kara 7.2V 13.6Ah. Baakada batteriga waxaa loo isticmaali karaa CPAP, hawo-mareenka, mashiinka neefsashada battery batteriga bedelka ama codsiyada kale ee ku habboon. Cabbir yar oo leh awood dhab ah oo sare. Batarigu wuxuu leeyahay awood bandhig.Made oo ah Samsung 18650 unugyada baytariga ah ee nolosha dheer.Battery wuxuu ogolaan karaa ROHS, UL, CE, CB, UN38.3, MSDS, IEC62133, shahaadada KC oo ah shuruudaha macaamiisha.
Halbeega Wax soosaarka （Cadeynta） ee PLM-NH2057QE34:
Nooca 7.2v xirmooyinka bateriga li-ion
Cabbirka 23 * 78 * 151mm
Nolosha wareega 1000 jeer
Miisaan 1Kg / kumbiyuutarada
Muuqaalka Alaabada iyo Codsiyada NH2057QE34
1, Teknoloji dheellitiran;
2, Naqshadeynta lakabyo lakabyo badan;
3, farsamada isku xirnaanta kalsoonida sare;
4, Naqshad ballaaran oo hadda ah naxaas iyo nikkel naqshadeysan;
5, Isgaarsiinta go'doominta awoodda oo hooseysa;
6, Naqshadeynta Maareynta kuleylka gaarka ah;
Badeecadaha kala duwan ee la istcimaalo waa gurmadka korantada, gurmadka iyo u fidinta korantada, qalabka dibedda kuleylka korantada, qalabka elektiroonigga ah ee caafimaadka, qalabka korontada ku shaqeeya. Qalabka kale ee korantada. Qalabka badbaadinta, qulqulka korantada, laambadaha korantada iyo aaladaha kale ee gurmadka. Qalabka korontada ku shaqeeya ee korantada ku shaqeeya: iftiinka teendhada dibedda, koronto maqalka bannaanka, Aaladaha elektiroonigga ah ee qalabka: Qalabka wax lagu buufiyo ee CPAP, qalabka yar ee kale ee caafimaadka. qaboojiyaha gawaarida, matoorka gaariga, jaranjarada gaariga, gaariga gaariga lagu mayro
Hore: Asalka 24V 13.5Ah Bateriga Li-ion ee Dib-u-Soo-Kordhinta ee Loogu Talagalay Dhallaanka OEM & ODME
Xiga: Qiimaha warshadda UL ayaa ansixisay aaladda baaritaanka qalabka baaritaanka raajada 22.2v 900mah
Warshadda 18V 2.0Ah Bedelka Li-ion Gawaarida D ...
Mootada mootada magaalada loo yaqaan
24V 13.5Ah Li-ion batari dib loo soo celin karo ...
Lifepo4 24V 20AH Lithium ion Battery xirmo R ...
IP67 7.4V 2200mAh batari Lithium ion weara ...